Sacuudiga Iyo Imaaraadka Oo Hadallo Kulul Is-weydaarsaday - Caasimada ...
Sacuudiga iyo Imaaraadka oo hadallo kulul is-weydaarsaday – Caasimada …
Riyadh (Wararka Maanta) – Sacuudi Carabiya iyo dalka ay xulufada yihiin ee Imaaraadka Carabta ayaa is-weydaarsaday hadallo kulul oo naadir ah oo ku saabsan heshiis la xiriira soo-saarka shidaalka ee dalalka ku bahoobay ururka OPEC+.
Imaaraadka Carabta ayaa aad uga soo horjeestay heshiis ay soo jeediyey dalalka soo saara shidaalka ee ku jira OPEC+, kaasi oo sare loogu qaadayo wax soo-saarka.
Khilaafka labadan dal ee Carbeed ayaa sababay is-mari waa helis gelin kara isku day lagu xakameynayo qiimaha shidaalka caalamka ee sare usii kacaya, xilli caalamku kasoo koobanayo COVID-19, ayna jirto baahi badan oo loo qabo shidaalka.
“Waxaa iska soo horjeeda koox dhan iyo hal dal, taasi oo ah arrin murugo leh xaqiiqdii,” waxaa sidaas Taleefishinka Bloomberg u sheegay Wasiirka Tamarta Sacuudiga Amiir Abdulaziz bin Salman, isaga oo soo jeediyey in Imaaraadka Carabta ay kali ku noqdeen OPEC+ oo ay xubno ka yihiin 23 dal.
Wararka Maanta : Guddiga hirgalinta doorashooyinka Jubbaland oo barlamaanka Jubbaland ugu...
Wareysi kale oo uu siiyey taleefishinka Al-Arabiya, Amiir Abdulaziz ayaa ugu baaqay Imaaraadka Carabta “inay xikmad iyo tanaasul” sameeyaan kahor kulanka OPEC+ ee maanta.
OPEC+ ayaa soo jeedisay in soo-saarka shidaalka sare loo qaado 400,000 oo barmiil maalinkiiba, laga billaabo August illaa December, taasi oo laba milyan oo barmiil ku dareysa suuqyada caalamka kahor dhammaadka sanadka.
Si kastaba, Imaaraadka Carabta ayaa doonaya kaliye sare u qaadis kooban oo ku eg kaliya bisha August, waxayna dalbadeen heshiis ka wanaagsan midka lasoo bandhigay.
Wararka Maanta : Diyaarad siday dad badan oo rikaab ahaa oo ku dhacday gobolka Gedo
“Imaaraadka Carabta waxay dalbaneysaa caddaalad la xiriirta heshiiska cusub, iyo xuquuqda madax-banaani ee aan u leenahay inaan dalbano waxa ay helayaan dalalka kale,” waxaa sidaas yiri Wasiirka Tamarta Imaaraadka Suhail Mohamed Al-Mazrouei.
Hadallada kulul ay is-weydaarsadeen Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa naadir ka ah Bariga Dhexe, oo ah gobol khilaafyada si hoose looga xaliyo daaha gadaashiisa.
Haddii aanay OPEC heshiis ku gaarin kulanka manata dhacaya, waxaa sare u kici doona qiimaha shidaalka caalamka.
Wararka Maanta : Doorashada xildhibaanada BF ee Koonfur Galbeed oo la geeyey guriga Laf...
HirShabelle oo go’aan kasoo saartay haddii Beledweyne lagu qabanayo do…
Booliiska Koonfur Afrika oo helay maydka ganacsade Soomaaliya oo dalkaas…
Wararka Maanta : Wararkii ugu dambeeyay Banaanbaxyada rabshadaha wata ee Koonfur Afrika...
Wararka Maanta : Dagaalka gobolka Tigray oo ku faafay gobolo kale - Wararka Maanta:...
Wararka Maanta : Marjaca go'aanada la xiriira doorashada dalka oo loo gacan geliyey max...
Wararka Maanta : Jighiga oo maanta si wayn looga ciiday
Wararka Maanta : Madaxweynaha Somaliland oo cafis u fidiyay maxaabiista danbiyada fudud...
Wararka Maanta : Puntland oo Somaliland u dirtay dalab la xiriira dilkii Ibraahim Cabdi...
Wararka Somali46 mins ago
Caalamka Videos19 hours ago